Halyayga reer Brazil Rivaldo oo kaga digay Barcelona hoos u dhaca Real Madrid kahor kulanka El Clasico – Gool FM
Halyayga reer Brazil Rivaldo oo kaga digay Barcelona hoos u dhaca Real Madrid kahor kulanka El Clasico
(Barcelona) 26 Okt 2018. Halyeeyga reer Brazil Rivaldo ayaa kaga digay kooxdiisii hore ee Barcelona in qaab ciyaareed xun ay kala soo hor muuqdaan kooxda Real Madrid kulanka El Clasico ee Axada soo aadan.
Rivaldo ayaa carabka ku adkeeyay sida uu muhiim ugu yahay kooxda Barcelona kulanka soo aadan El Clasico ay Axada Real Madrid kula ciyaari doonaan horyaalka La Liga garoonkooda Cump Nou.
“Suuragal ma ahan in la yareysto koox weyn sida Real Madrid oo kale, xirfadeyda kubada cagta ee kooxda Barcelona waxaan aadnay Real Madrid, waxay ku jirtay xaalad adag, sababa la xiriira natiijo xumi”.
“Laakiin kulankii aan wada ciyaarnay xiligaas waxaan wada galnay barbaro, kadib waxay sii joogteeyeen guulo xiriir ah”.
Laacibka reer Brazil ee Rivaldo ayaa wuxuu hadalkiisa kusoo xiray qaab ciyaareedka Real Madrid tan iyo markii uu shaqada tababarka la wareegay Julen Lopetegui.
“Kaliya ma ahan inaysan helin natiijooyin wanaagsan, balse sidoo kale xili ciyaareedkan ma aysan soo bandhigin qaab ciyaareed wanaagsan, waxay guul 1-0 ah kaga gaareen koox yar tartanka Champions League”.
“Waxaan ku dhawaaday inaan ka tago kooxda Barcelona” – mid ka mid ah xidigaha muhiimka ah ee Braca oo sidaas yiri
Aaron Ramsey oo ka jawaab celiyay su'aal ku aadaneed suurtagalnimada uu ugu dhaqaaqayo kooxda Tottenham